Starburst Ohere mepere Daashi No ego choro…
N'ihi na niile Fans nke ndị bejeweled egwuregwu, abịa a àjà nke bara nnukwu uru emere dika kpakpando. The Starburst ohere mpere egwuregwu bụ fun na-egwu na mara mma ile anya na, nke na-eme egwuregwu na-emekwa ụfọdụ ruo ọtụtụ awa na njedebe. Ewetara unu site NetEnt Touch Games, e nwere ọtụtụ iji merie a fun jupụtara game.
The oké ihe banyere bejeweled ụdị egwuregwu bụ otú na-eri ahụ ha na-. Ọ bụ na nke a otu mmụọ na Starburst slots has been developed, eme ihe iji na nke na ukporo-egwu ya edekọ ihe iji a oghere egwuregwu. The egwuregwu nwere ise-esi anwụde na iri paylines, na nwere ike Egwuru n'ihi na dị ka ala dị ka 10p ka dị elu dị ka £ 100. Ọ bụ maa a egwuregwu na ga adọta a Ìgwè mmadụ gwara ọgwa nke cha cha egwuregwu, kasị eleghị anya ndị na-amasị ha nzo na-na elu n'akụkụ.
E nwere ihe a nnọọ mkpuru studded obi na-adị na- Starburst na w n'okirikiri-agbakwụnye, ka a pụrụ isi kwuo. Na ndị niile na-egbuke egbuke, dazzling mmetụta na gị na ihuenyo, ị na-ga-esi nwee mmasị edinam na na-egwuri egwu na bursting ndị jewels. Ya ala n'ihe ize ndụ-eme ka ọ bụ ezigbo oghere maka ọbụna beginners na-etinye aka na, dị ka ogologo oge ị dị njikere dịkwuo gị Wager ọ bụla atụ ogho.
-Egwu egwuregwu ahụ bonus mma a na ihe a na-akpọ Starburst ọhịa feature. Ebe a, ị nwere Starburst akara, nke bụ egwuregwu si ọhịa akara, on-esi anwụde 2, 3 ma ọ bụ 4. Nke a nwere ike mgbe ahụ dochie aịkọn na na ukwu nke mere na i nwere ike inwe a respin maka free. Ị nwere ike ikwugharị a usoro maka a kacha nke ugboro atọ.
Ọ dị mwute, egwuregwu kọrọ a free spins Njirimara, ya mere ị ga-eme eme na Starburst Ọhịa feature na-eme ka ndị kasị nke gị Wager n'oge ahụ. N'agbanyeghị na, ebe ọ bụ na nke a egwuregwu nwere ike gbanwee site retriggering ndị respins, ị nwere ike mgbe niile na-atụ anya na-a mma payout ka ogologo dị ka ị na-ahụ na-esi anwụde spinning.
Gịnị mere play Starburst Ohere mepere Mobile na Online?
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eche dị ka a nwa agbọghọ na-egwu egwu Starburst, ị ka ga-achọ na-alaghachi oké egwuregwu. The mmetụta dị ukwuu, ndị dị n'inweta nwere dị elu, dị ka ogologo oge ị na-enwe ndidi ma na-gị na wagers on. Unu nwere ike ịnọ mesmerized na w mmetụta nke ndị a bara nnukwu uru maka awa na njedebe na na njedebe nke ya na e nwere ihe a jackpot dị elu dị ka £ 50,000 eche gị. Ọ bụ a na-ajụ ndịiche oghere, otú jikere nzọ na ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ị na-ezuru ego. The egwuregwu nwere ihe RTP nke n'elu 96%, otú e nwere ọtụtụ ihe na-enye maka kpakpando jupụtara eyed player.
Play Startburst Ohere mepere na Bilie gị Welcome daashi ngwugwu UGBU A!